Obodo Izmir nke biputere ebipụtala akụkọ akpọrọ "COVID-19 Resistance Action Plan" n'ihi ọrịa coronavirus na-emetụta ụwa niile. Obodo Izmir nke obodo Etioir bidoro ọrụ izizi na obodo Turkey Covidien Crisis [More ...]
Wa dum na-agbaso ọgụ coronavirus ọrịa na-efe efe n'okpuru nduzi nke Turkey zutere usoro nchịkwa ọhụụ na njikwa ọchịchị obodo. N’oge ọhụrụ a mgbe atụmatụ na ihe ndị gbanwere agbanwe gbanwere kpamkpam, Obodo İzmir nke Obodo Etiti bidoro [More ...]
Aha onye uwe ojii ahụ bụ Fethi Sekin, onye nwụrụ n'ihi okwukwe afọ atọ gara aga ka ọ na-anwa igbochi mwakpo bọmbụ a megide againstlọ Ikpe Izmir, ga-adị ndụ ugbu a na Ọchịchị Izmir. “Fethi Sekin” ga-eje ozi n'ime General Directorate nke İZDENİZ [More ...]
Shift ndị China si na ndị na-ebubata ihe oriri nri
A na - ewepụ otu ihe mgbochi maka mbupụ ngwaahịa nke ugbo maka mba ndị dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ onewa n'otu n'otu. 54lọ ọrụ iri anọ na ise ga-enwe ike ibuga mmiri ara ehi na mmiri ara ehi na China. Azụmaahịa ọhụrụ Turkey-China kwekọrọ na mmepe nke usoro a dị mkpa [More ...]
Ndị otu Aegean Exporters 'jikọrọ ọnụ maka ndị ọrụ ahụike
Njikọ Ege ekspootu Ege, nke debanyerela ọtụtụ ọrụ ọrụ mmekọrịta ọha na eze n'oge usoro ọnya ọrịa coronavirus, na-aga n'ihu na-akwado ndị ọrụ ahụike. Onye isi oche Onye Ọchụpụ Onye Ọbu Mbupu Onye Ọchịchị Aegean Jake Ashkenazic, Kovid-19 n'otu ọ bụla kemgbe a hụrụ ya na Turkey [More ...]
Turkey mbụ Virtual Fair Start Shoedex
Ihe ngosi ahia mbu nke ahia izizi maka nkwado na nkwado nke Ministri nke Ndi Aegean Akuko na Akpụkpọ Ahia Ederede na Nkpuru nke Turkey na ntinye aka na nkwado nke ŞZFAŞ na otu akpụkpọ ụkwụ ụwa na akụrụngwa akpụkpọ anụ Shoedex2020 [More ...]
Ndi otu Denizli Metropolitan Municiparies na-elezi anya megide Kovid-19 n’ime akụrụngwa ha niile, bụ nke emechiri oge nwa oge na ntughari n'oge ọhụụ, na-emebi na Denizli Teleferik na Bağbaşı Plateau, na-eme ka akụrụngwa ahụ dị njikere ileta. [More ...]
Nkwado nke Izmir Metropolitan Obodo na mpaghara na mpụga obodo ukwu na-aga n'ihu. Metropolitan arụpụtala 146 puku 657 tọn asphalt na Bergama na afọ gara aga wee wuo ụzọ mmepụta 463 km. 44 puku 600 na mpaghara [More ...]
Ndi Obodo Izmir echefughi echefue distrikti na obodo ndi ozo di n'etiti etiti na mwakpo ahu o busoro n’oge mgbochi oge etinyere n’izu. Tọn asphalt na Torbalı, Çeşme na Dikili na ngwụsị izu a [More ...]
Ndi isi obodo Izmir na aga n’ihu n’ịkwado ndị ọkachamara na ahụike na ndị na-ahụ maka ọgwụ, ndị nọ na mbido ịlụso ọrịa coronavirus ọgụ. Ndị niile na-ahụ maka njem njem ọha dị n’aka ndị ọrụ ahụike, ndị na-ahụ maka ọgwụ na ndị na-ere ọgwụ ruo ọnwa atọ. [More ...]
Ajuju Izmirim Card Balance na Izmirim Kaadị TL na-ebu: Kentkarts, nke ejirila na İzmir njem ọha maka ọtụtụ afọ, agbanweela na İzmirim Card ka June 1, 2015. Ebe ọ bụ na enweghị mgbanwe na sistemụ maka ndị ọrụ [More ...]
Narlıdere Üçkuyular Iskele Bus Schedule Hours bụ nke ESHOT mere na oge mbụ site na Narlıdere na ụbọchị ọrụ izu ụka na Satọde bụ na 06:15 site na Üçkuyular İskele. Flightsgbọ elu ikpeazụ bụ ụbọchị izu na [More ...]
Cahit Özkan, onye otu AK Party Group na Denizli osote, kwuputara na A ga-ewepụta Agen Highn-Denizli Highway Project iji gosipụta ọzọ na June 11. Özkan, onye na-eme ogbako ndị nta akụkọ kwuru banyere okporo ụzọ Aydın-Denizli, sị: “Ọrụ dị nro nke okporo ụzọ Aydın-Denizli dị njọ. [More ...]
Izmir Karşıyaka Maka Ọnọdụ okporo ụzọ na nke okporo ụzọ RAYHABER Ọ na-enye ụzọ kachasị mfe na ọnọdụ ụzọ ị nwere ike iji maapụ okporo ụzọ dị ndụ. Ọnọdụ okporo ụzọ nke etiti Izmir na mpaghara ndị ọzọ, nnukwu okporo ụzọ [More ...]
Maka İzmir andzọ na Ọnọdụ okporo ụzọ RAYHABER Ọ na-enye ụzọ kachasị mfe na ọnọdụ ụzọ ị nwere ike iji maapụ okporo ụzọ dị ndụ. Ọnọdụ okporo ụzọ nke etiti Izmir na mpaghara ndị ọzọ, ebe okporo ụzọ dị arọ [More ...]
Ọrịa Corona na-agbasa n'ime oke nke usoro emechiri n'ọgbakọ ọgbakọ na March 16, ka e mepere ụlọ alakụba na ekpere Friday na Central Antalya Döşemealtı yana Turkey niile taa. Usoro Coronavirus [More ...]
Emechara asọmpi akụ akụ dị ọnụ ahịa dị n'ịntanetị bụ nke Izmir Metropolitan Municipality haziri na May 19. Mgbe onye meriri n'asọmpị ahụ bụ Sedat Can Güneş, Cansu Tiryakioğlu tozuru inweta ikike ọrụ ahụ. Mee 19, Izmir Obodo ukwu [More ...]
Ndi isi obodo Izmir bu nke ndi metutara ihe Obodo Izmir nke obodo ukwu na-agbasa ngwa nke maskematic ọ malitere iji mee ka ụmụ amaala nweta nnabata ahụike n'efu. [More ...]